Yini umdobi yangempela akazange ucabange indlela ukubamba eyikati! Le nhlanzi kuyolokhu efiselekayo inyamazane. Akukhona nje kuphela esiphundu, kodwa futhi ezinkulu. Catching isenzakalo irekhodi ungakwazi ke eside ukutshela abangani bakho yamaprojekthi ingxenye. Abathandi ukudoba eyikati has izimfihlakalo zayo siqu ekhethekile they cha phendla kunoma ubani. Kodwa into namanje kungatholakala.
Le nhlanzi engavamile kudinga, isimo sengqondo ekhethekile ehloniphekile. Ukuze ufunde indlela ukubamba eyikati, kudingeka utadishe imikhuba yayo. Catfish - ubusuku umzingeli. Yena ukuthandwa cool amanzi, hhayi enamandla. Anakho encane emehlweni futhi ngimpofu abukhali, kodwa kakhulu athuthukile lokuhogela. Kungcono uyithola kusihlwa noma ekuseni, kodwa bengase bakulume ubusuku bonke. Usuku eyikati uya bangabeki emseleni. Ngakho-ke, lapho sinquma indlela catch eyikati yokuqala indawo yokuthola lezi izimbobo. Futhi ukubamba eceleni endaweni yokuphumula, uma lihlangabezana nizikhiphe ekuzingeleni ebusuku. Kulokhu, ochwepheshe musa ukweluleka ukuhlala endaweni eyodwa isikhathi esingaphezu 30 - 40 imizuzu. Uma ngalesi sikhathi eyikati musa ukuluma, khona-ke okwamanje, mhlawumbe kungenjalo, futhi kudingeka bheka kukhona eminye.
Kukholakala ukuthi lo lolo kangcono ekubambeni eyikati - zemvelo. Lokhu kungaba lolo bukhoma, kweqembu abavamile nemisundu eminingi, umnyundu ezinkulu. Akumelwe sikhohlwe ukuthi omkhulu eyikati izicupho amaphunga, ngakho ngaphambi nibona eyikati, ungakwazi sokuyenga indawo izinhlanzi ebolile. Bait kumelwe ibe nkulu ngokwanele okungenani yesishiyagalombili usayizi ukukhiqiza esizayo. Ukubamba kudingeka engavamile kakhulu, uyakwazi ukumelana isisindo catch esizayo. It - inombolo hook-12 nangaphezulu, umugqa eqinile ukudoba, a Sinker ezinhle. Asikho isidingo sokukhathazeka ikakhulukazi mayelana nendlela ukufihla lokhu, ngoba izinhlanzi babe ebumnyameni, futhi emehlweni izinhlanzi akuyona kakhulu. Positioning lolo kuyadingeka ezansi kakhulu noma kancane ngenhla ke. Ngenxa yale njongo, main line ukudoba iboshelwe Sinker, futhi at ibanga 30-50 cm ngenhla leash eyengeziwe yokugcizelela ngodobo, okuyinto zifakwa ku lolo.
Uma ungakwazi ukusebenzisa isikebhe, akukho abangakwenza ngaphandle ukubamba eyikati ukusuka ogwini, usebenzisa ukuphotha ezinhle eqinile. Izinsimbi noma ezinye bite okuwuphawu kulokhu ayidingeki, ngoba eyikati abalumayo kanzima futhi abukhali, it kalula ukuyikhipha induku. abadobi abaningi uyazibuza kanjani ukubamba eyikati kwi donk. Ngenxa yalesi abazingeli abanolwazi belulekwa ukusebenzisa Imbongolo standard, okuyinto aqukethe Sinker phambili futhi ngengwegwe. Setha ukuba kube indawo yemvelo Som: ngqo imigodi, ku imiphetho zabo, esikhathini creeks ngaphansi amabhuloho nakwezinye izindawo ezinjalo. Entwasahlobo, lapho amanzi zigcwele namanzi eyikati zingatholakala emanzini angajulile, lapho uthanda bafuna gazinga abasebasha. Imbongolo kudingeka uhlole njalo futhi uhlele babekuphi spikes obonakalayo futhi isici chvakane eyikati. Futhi abazidebeseleli ukuphotha ukudoba kusukela ogwini, ngokuvamile linikeza imiphumela emihle.
Catfish - isizinda, okungaba yokuziqhenya ngayo yonke umdobi. Kunezenzakalo, isisindo eyeqa 90 kg. inhlanzi okunjalo - isitha ngempela abanolwazi futhi zihlakaniphile. Ngakho-ke, isikhathi sakho wenze nomzamo ehilelekile bamba wakhe, uzokhokhelwa emuva ngokugcwele!
Kungenzeka yini ukunikeza isithonjana? Yimaphi amaholide futhi unike abanye imifanekiso?
Yini iplanethi ayinakho emkhathini? ukuhlaziywa enemininingwane